Mandrosoa indray ny Hua Hin sy ny Cha Am Iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mandrosoa indray ny Hua Hin sy ny Cha Am Iraisam-pirenena
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Thailand • Travel Wire News
Novambra 4, 2018
Natomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny Skål International Hua Hin & Cha Am.
Ireo klioba natomboka indray dia ny fahitan'ny Tale Jeneraly, Andriamatoa Richard Mehr, avy ao amin'ny Putahracsa Resort, izay ho filohan'ny klioba mpisolo toerana miaraka amin'i Andriamatoa Stacey Walton, Tale Jeneralin'ny Banyan Golf Club, Hua Hin izay ho filoha lefitra mpisolo toerana. an'ny klioba vao natomboka indray hanavaozana sy handray fiandohana vaovao ho tombontsoan'ny dia sy fizahan-tany.
Hetsika manokana iray, hankalazana ny famoahana indray, dia natao niaraka tamin'ny mpikambana Skål sy ireo vahinin'izy ireo tao amin'ny Restaurant Oceanside kanto ao Putahracsa Resort, Hua Hin.
11-taona lasa izay taorian'ny nanokanana an'i Skål Intl Hua Hin & Cha Am tany am-boalohany ary efa ela no niandrasan'ireo matihanina amin'ny hotely, golf ary ny fizahantany fizahan-tany ao amin'ity toeram-pialan-tsasatra Royal ity ho vondrona iray, izay manana tanjona iraisana ny famoronana klioba vaovao miaraka am-piandohana vaovao sy amin'ny ho avy mahafinaritra amin'ny fanaovana asa eo amin'ireo namana. Ary hampiroborobo amin'ny farany feo ny tanjon'ny Hua Hin sy Cha Am manerantany.
Richard Mehr tamin'ny kabariny fanokafana dia nanaiky sy nisaotra ny filohan'ny Skål Thailand, Wolfgang Grimm ary mpikambana ao amin'ny ekipa avy amin'ny klioba Skål 6 any Thailand ankehitriny: Phuket, Krabi, Samui, Chiang Mai, Hua Hin ary Bangkok. Nisaotra ireo solontenan'ny klioba nanatrika ny fanohanany ny famoahana indray ny klioba izy niaraka tamin'ireo mpikambana 18 mpanorina avy ao Hua Hin sy Cha Am izay nahitana ireo mpitantana jeneralin'ny Hyatt, Marriott, Intercontinental, Avani, Anantara, G Resort & Marrakesh te-handefa indray ny klioba sy ny iraka ary tanjon'ny Skål Iraisam-pirenena.
Stacey Walton naneho hevitra hoe: “Mpikambana mpanorina ny Skål Int'l Hua Hin & Cha Am aho tamin'ny 2007 ary nampalahelo fa niongana ilay vondrona taona vitsivitsy lasa izay. Nozaraiko ny fahitana toa an'i Richard fa ilaina ny fikambanan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena hahafahan'ny matihanina mitovy hevitra amin'ny trano fandraisam-bahiny, golf, fitsangatsanganana ary fizahan-tany manangona sy mifanakalo vaovao, mizara hevitra ary manara-baovao hatrany amin'ny hetsika sy hetsika any Hua Hin & Cha Am amin'ny tontolo iaraha-monina.
"SKÅL INTL amin'izao fotoana izao dia manana mpikambana mihoatra ny 14,000 ao amin'ny klioba 400 any amin'ny firenena 90 eo ho eo ary hitako ny lanja sy ny mety hoentin'ity tambajotra ity ho an'ireo mpikambana", hoy izy.
Ny traikefa fisakafoanana hariva dia nomanin'ny ekipa mpahay sakafo mahavariana an'i Putahracsa nomen'ny divay divay sy ny mpikambana ao amin'ny Skål Int'l Hua Hin & Cha Am izay nankalaza ny fanombohana fiandohana vaovao miaraka amin'ny fanamasinana ny "FAHASALAMANA NY NAMANA NY FAHASALAMANA SADY NY FIAINANA LOHA!
Ny hetsika manaraka dia hatao ao amin'ny Banyan Golf Club, Hua Hin, ny talata 20 novambra 2018, izay manome sarany maitso manokana: THB.2,200 amin'ny andro ho an'ny mpikambana Skål sy ireo vahininy.